Ma dhamaaday mise waqti ayaa u dhiman Baarlamaanka Koofur Galbeed? | Somsoon
Home WARAR Ma dhamaaday mise waqti ayaa u dhiman Baarlamaanka Koofur Galbeed?
Ma dhamaaday mise waqti ayaa u dhiman Baarlamaanka Koofur Galbeed?
Furitaanka kalfadhiga sideedaad ee Golaha Wakiilada maamulka Koofur galbeed Soomaaliya oo maanta a qorsheeyay in laga furo magaaladda Baydhabo ayaa baaqday kadib kulamo aan loo kala kicin oo ilaa hebeenkii Isniinta iyo saacadihii hore Talaadda maanta ah ka socday Baydhabo.
Madaxweynaha maamulka Koofur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa kulan uu layeeshay Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal iyo dhiggiisa Jabuuti Mxamed Cali Xaamud waxaa uu u sheegay in Baarlaamka Koofur Galbeed uusan u harin waqti kalfadhi ku filan.
Gudoomiyeyaasha Baarlamaanadda Jabuuti iyo Soomaaliya oo markii hore Baydhabo u tagay in ay ka qabgalaan furitaanka fadhiga Baarlaamaanka gobolka ayaa galabta kasoo tagay Baydhabo si ay barri uga qayb galaan furitaanka kalfadhiga 6 aad ee Baarlamaanka federalka.
Ilo xog-ogaal ah ayaa Somali Online News u sheegay in maanta Madaxtooyadda magaaladda Baydhabo uu ka dhacay kulan ay ka dhexmaray Xildhibaadda Koofur Galbeed iyo Madaxweyne Laftagareen oo ay goob joog ka ahaayeen labadda Gudoomiye baarlamaanadda Jabuuti iyo Soomaaliya.
Waxaa kulankaas looga hadlay in muddo laba bilood ah ee baarlamaanka Waqtigiisa ka dhiman laga shaqayn doono sidii loo heli lahaa Baarlamaan bedela.
Qaar ka mid ah Xildhibaanadda ayaa la sheegay in ay ka horyimaadeen sida ay wax u socdaan.
Waqtiga Baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa ku eg horraanta bisha December.
Madaxweynaha Maamulka Koofurgalbeed ayaa marki uu ku jiray ololaha doorashadiisii waxaa uu Xildhibaanadda u balanqaaday in uu muddo kordhin u sameynayo islamarkaana muddo xileedkoodu dhamaandoono marka uu kiisu dhamaado.
Balse, kulamo uu Laftagareen magaaladda Muqdisho kula yeeshay Madaxweyne Farmaayo iyo Ra’iisu Wasaare Khayre ayaa looga diiday in muddo kordhin oo sameeyo Baarlamaanka Koofur Galbeed.
Beesha caalamka ayaa sidoo kale diiday in muddo kordhin loo sameeyo Baarlamaaanka iyaga oo ku sababeeyay in ay taasi wax u dhimeyso dimoqaraadiyadda wadanka.
Cabdicasiis Xasan Maxamed ayaa magaaladda Baydhabo ku laabtay waxaana uu 27-kii September isugu yeeray Xildhibaanadda maamulkiisa isagoo u sheegay in madaxda Dowladda federal-ka iyo Beeshada Caalamkuba ay ka diideen muddo kordhin.
Waxaa uu sidoo kale Xildhibaanadda u sheegay in ay isu diyaariyaan doorasho cusub oo ay Odoyaasha dhaqanku garwadeen ka yihiin islamarkaana uu Xildhibaan walba ku laabto beeshiisa si uu markale dib ugu raadsado kursigiisa.
Qaar ka mid ah Xildhibaanadda Koofur Galbeed ayaa Madaxweyne Lafta Gareen ugu goodiyay in ay keeni doonaan mooshin xilka qaadis ah haddii uusan mudada u kordhin taasi oo muran kale abuurtay.
Si looga hortago in Madaxweynaha mooshin laga keeno ayaa loo sababeeyay baaqashadda furitaanka kalfadhiga sideedaad ee Golaha Wakiiladda waxaana madaxweynuhu ku dooday in waqtiga haray uusan ku filneyn kalfadhi.
Taas badalkeeda waxaa uu lafta gareen oo kaashanaya Gudoomiyaha Baarlamaanka maanta Baydhabo ka furay shir dib u heshiisiin ah oo aan la sheegin mudada uu soconayo.
Waxaa jira Xilhibaano u ololeynaya in la furo kalfadhiga Baarlamaanka maadaama loo baahanyahay in la dhiso guddiyada ka shaqaynaya soo xulidda Baarlamaanka xiga.
Madaxtooyadda Koofur Galbeed ayaa ka shaqayneysa sidii loo bilaabi lahaa shaqadda Baarlamaan cusub.
Article horeWenger “waan diiday dalab iiga yimid Premier League”
Article socoda Duqa Muqdisho oo kulan balan qaad loogu sameeyay la yeeshay James Swan